Top 50 Free Music nbudata Sites ịhụ na Download Free Music
Ị nwere ike mgbe niile na-eche ma e nwere ụzọ ibudata music maka ibu. Azịza dị mma. Na ebe a bụ usoro nke 50 saịtị nanị maka free music nbudata. Anyị ọkwá na 50 saịtị dị ka ya Alexa n'usoro, nke kpebisiri ike site na saịtị ewu ewu. Ka lelee ha aka ịhụ nke na-arụ ọrụ kasị mma maka gị.
Ị nwere ike ugbu ibudata free songs na Amazon. The Amazon nyere songs nke ọ na-eri na ya music n'ọbá akwụkwọ. Pịa ebe a na-elele free songs ị ga-amasị.
Nweta songs na dị iche iche Genres nke music na iji iTunes. Ọ na-enye free music downloads. Gaa iTunes Echekwala na anya maka Free on iTunes njikọ n'okpuru Quick Links. Mgbe ahụ ị ga gụrụ a nnukwu n'ọbá akwụkwọ nke free songs.
Ọ bụ ezie na Vimeo bụ a video dabeere saịtị, ya na-enyekwa free na iwu music downloads na ị ga-amasị.
# 4. Internet Archive si Audio Archive
Ike na fascinates gị onwe gị site na-niile ọkacha mmasị gị songs na iji Internet Archive si. Ọtụtụ ndị ga-n'ezie n'anya na iji Internet Archive si
Ike na ẹnyene onwe gị na iji Soundcloud. Site n'ike nke Soundcloud ọtụtụ music hụrụ nwere ike dịtụ biputere ma na-eso niile ha mmasị songs. Ọtụtụ ndị ga-n'ezie n'anya na-eji Soundcloud ibudata music kwa.
The mp3skull.comis otu n'ime ndị kasị dị irè music na-eweta iji mmadụ niile. Ọ nwere ike na dịtụ-eme ka ọtụtụ music hụrụ obi ụtọ na-enwe. Ya mere, na-egbu owu na-ama site na-ekpori ndụ iji mp3skull.com na nwekwara ike ibudata music site na ya.
Na-emeso na indulge onwe gị site na iji na ịga Last.fm. The Last.fm nwere ike maa enyere ọtụtụ ndị na-niile ha mmasị songs na Genres nke music ebe ọ nwere ihe karịrị 25 peeji nke free music downloads.
Mgbe uche ohere ịbụ otu n'ime ndị mbụ ònye pụrụ ige ntị ka ndị ọhụrụ na songs nke ọkacha mmasị gị artists nakwa budata ha. The iMesh ike dịtụ nye enyemaka ndị chọrọ inwe mmelite banyere music ụlọ ọrụ.
-Emeso onwe gị na-ege ntị niile ọhụrụ songs nke ọkacha mmasị gị nka na gbalaga. Ọtụtụ ndị ga-n'ezie n'anya na iji Songs. PK. Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe na ibudata ụfọdụ nke ọkacha mmasị gị songs n'iji ya gee ntị na Songs. PK bụ n'ezie a nnọọ ezi nhọrọ.
Igbu ahuokika site n'ọnụ n'ịnọgide onwe gị ihe site na-ege ntị niile ọkacha mmasị gị songs na budata ha mfe. The DJMaza.com ike dịtụ gị ojuju afọ maka music na songs nke ọkacha mmasị gị artists.
Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya na-eme gị onwe gị music mgbe ahụ i kwesịrị iji MP3Juices. The MP3Juices-enye ohere niile ndị ọrụ biputere ma na-eso niile music na ha mere. Ọ na-enye ohere ọtụtụ ọrụ ibudata songs maka offline playback.
# 12. New Album a
Get mmelite banyere ihe niile banyere music ụlọ ọrụ na ọhụrụ songs nke ọkacha mmasị gị artists na ìgwè ndị agha na-eji New Album Hapụ. Ọ nwekwara ike-ekwe ka ị ibudata songs for free.
Ẹnyene na-egbu ahuokika site n'ọnụ n'iji ya gee ntị na SoundClick. The SoundClick ike dịtụ nye aka gị ka i wee pụrụ ige ntị na niile ọkacha mmasị gị songs mgbe nbudata.
-Achọ ihe dị mma nke ukwuu isi iyi nke ntụrụndụ? The MyFreeMP3 bụ a free music-eweta na online redio n'ihi na ọtụtụ ndị. Ọ nwekwara ike ka download music for free.
Music bụ nnọọ ezi ụzọ maka ntụrụndụ na dị ka a ọgwụ. Na-ege ntị music ike dịtụ-eweta ọṅụ na ntụrụndụ na ndụ gị. Ya mere, ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ụzọ iji nweta ntụrụndụ mgbe ahụ i kwesịrị akụ na SoundOwl.
Eme ka ndụ gị na-ekpo ọkụ na energetic site amalite ụbọchị gị na ezi songs. Site na iji jamendo ị ga-eme ka gị na ụbọchị a dị nnọọ mma ụbọchị. I nwekwara ike ibudata niile ọkacha mmasị gị songs-eji nke a online ọrụ.
Enweta a nnọọ isi iyi nke ntụrụndụ site na PureVolume. The PureVolumen ike dịtụ eme gị obi ụtọ na energetic. The PureVolume nwere ike maa nye gị niile songs na ị chọrọ nwere na budata ha maka free.
Indulge na-eme ka ndụ gị obi ụtọ site na iji Prostopleer. The Prostopleer nwere ike n'ozuzu eme ka ndụ gị ọzọ na-akpali akpali na-ekpo ọkụ n'ihi na ọ nwere ike inye gị niile songs na ị chọrọ nwere na ibudata.
Ị na-achọ ihe online music eweta na nwere ike inye gị free download nke songs? Ọ bụrụ na ee, mgbe ahụ ị na-mere kechioma n'ihi na Free Music Archive pụrụ nnọọ inye aka gị. Ọ pụrụ inyere gị download niile songs na ị chọrọ nwere maka free.
# 20. Song n'Anya
Music hụrụ ga-n'ezie n'anya ibudata ha mmasị songs for free. Ọfọn, ọtụtụ song hụrụ dị nnọọ kechioma nwere SongsLover n'ihi SongsLover nwere ike inye ha ihe ha chọrọ nwere.
Amalite ụbọchị gị ziri ezi na-enwe obi ụtọ site na ARTISTdirect. The ARTISTdirect ike dịtụ-eme ka ọtụtụ ndị na-enwe obi ụtọ site n'inye niile songs na ha chọrọ nwere. Ọ na-enye free download niile songs na ị chọrọ inwe.
Igbu ahuokika site n'iji ya gee ntị na mp3lemon. The mp3lemon nwere ike maa gị ojuju afọ ịhụ na ibudata ọkacha mmasị gị songs. Site n'ọnụ na-ege ntị niile ọkacha mmasị gị songs ị pụrụ ime ka ndụ gị nwee obi ụtọ na n'ike mmụọ nsọ.
Mee ambiance ụlọ gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ site n'iji ya gee ntị na mrtzcMP3.net. Jiri songs na nke a online redio dị ka gị ndabere mgbe na-eme ụfọdụ n'ime ọrụ gị. Na-ege ntị ọkacha mmasị gị songs nwere ike iwepụ nchegbu na-adịghị mma vibes.
Kwụsị nchegbu na ndị ọzọ na-adịghị mma vibes site n'ige ntị ọkacha mmasị gị songs na iji NoiseTrade. The NoiseTrade bụ ihe online redio na nwere ike inye gị niile songs na ị chọrọ nwere ma na-anụ.
Gaa saịtị a >> e
Na-a music n'anya na iji MP3.com. The MP3.com nwere ike n'ụzọ zuru okè nye gị niile songs na dị iche iche music Genres na ị chọrọ nwere na ibudata. Na-ege ntị ọkacha mmasị gị songs nwere ike maa eje ozi dị ka gị nchegbu aspirin.
# 26. Music Riri
Na-a music n'anya site na Music Riri. Na-a Music Riri ịnụbiga ọkụ n'obi ókè. The Music ịnụbiga ọkụ n'obi ókè ike dịtụ nye gị niile songs na ị chọrọ inwe. Ọtụtụ ndị ga-n'ezie n'anya ka ha mmasị songs site na Music Riri.
Kwụsị nchegbu gị n'uche na aru ahu site na-ege ntị music na ọkacha mmasị gị songs. Site n'ọnụ na-ege ntị ọkacha mmasị gị songs gị uche na ahụ nwere ike na-eche ntụrụndụ.
Eme ka ndụ gị ọzọ na; na fun site na-ege ntị ọkacha mmasị gị songs na Genres nke music na iji Mp3Raid. The Mp3Raid nwere ike maa nye gị niile songs na Genres nke music na ị chọrọ.
Enwe nsogbu na-achọta niile ọkacha mmasị gị songs? Luckily, ndị MP3 Download Ming pụrụ inyere gị aka dozie nsogbu a. The Archives-enye ohere ọtụtụ ọrụ ibudata music for free.
Captivate-emeso onwe gị site na-anụ ezi music na ọkacha mmasị gị songs. The MP3Fusion nwere ike maa eme ka ndụ gị obi ụtọ na-ekpo ọkụ. Ọ nwere ike inye gị niile mmelite na music ụlọ ọrụ.
Ike onwe gị ma na-niile ọkacha mmasị gị songs site free download awa site AirMP3. The AirMP3 ike dịtụ-eme ka ụbọchị gị na-ekpo ọkụ site n'ọnụ na-enye gị niile songs na ị chọrọ ịnụ.
Tinye mkpali na ọṅụ ndụ gị site na-ege ntị niile ọkacha mmasị gị songs na Genres nke music na Mp3Pal. The Mp3Pal nwere ike maa-enyere gị aka ibudata niile ọkacha mmasị gị songs for free.
Achọ a song? Na-echegbu onwe ọzọ n'ihi na Seekasong.com nwere ike inye aka ọchịchọ gị iji nweta ọkacha mmasị gị songs. Na-ege ntị ọkacha mmasị gị songs bụ otu ụzọ ị pụrụ ime iji indulge uche gị na ahu.
# 35. Mere oké
Nwere a okpukpu si gị agwụ ike na-agwụ ike ndụ kwa ụbọchị na-eme site n'iji ya gee ntị na MadeLoud. The MadeLoud nwere ike maa-enyere gị aka ibudata na-ege ntị ọkacha mmasị gị songs for free.
Ị bụ music n'anya? Ọ bụrụ otú ahụ, mgbe ahụ ị na-ekwesịghị ileghara t eji ArtistServer. The ArtistServer-enye ohere ya ọrụ ike ya ma ọ bụ nke aka ya playlist. Ọtụtụ ndị ga-n'ezie a n'anya online redio.
Bilie usọrọ mma nke ndụ site n'ozi ụda na-ekpo ọkụ music. Eme ka ndụ gị na-ekpo ọkụ na-akpali akpali site na jụụ ụda na music nke Hippomp3.com.
Eme ka ndụ gị ụtọ mgbe nile site n'iji ya gee ntị na Mp3Vube. The Mp3Vube nwere ike maa-eme ka ị ndụ ọzọ yi na-ekpo ọkụ site n'ọnụ na-enye gị niile ọkacha mmasị gị songs na music.
Igbu ahuokika na-eme ka ị ndụ ọzọ na-akpali akpali site na-ege ntị ọkacha mmasị gị songs na music. N'ịkwalite ezi ụda bụ otu ụzọ ị pụrụ ime iji na-enweta ọṅụ na a ndụ obi ụtọ.
Tinye agba gị ndụ site nke na-agbakwunye ezi ụda na ndụ gị. The Epitonic nwere ike maa-enyere ọtụtụ ndị mmadụ nweta ma ibudata niile ha mmasị songs na music. Ezi music bụ mma maka ahụ nke ndị mmadụ.
Tinye ọṅụ na agba ndụ gị site na O MP3. Na-ege ntị ezi music nwere ike inye ụtọ na ntụrụndụ na ndụ gị. Ọtụtụ ndị ga-n'ezie a n'anya online redio.
Agba mma nke ndụ site na ezi ụda na music. The Mp3Detective ike dịtụ eme ka ndụ gị obi ụtọ na afọ ojuju. Ezi ụda na music nwere ike maa tinye mma na agba ndụ gị.
Erite mma nke ndụ site na inwe ezi ụda na music. The BeSonic nwere ike zuru okè na-enye gị ikike ibudata niile ọkacha mmasị gị songs for free. BeSonic nwere ike tinye agba ndụ gị site n'inye gị ike na-ege ntị ọkacha mmasị gị songs na music Genres.
Ewepụ na-ezighị ezi vibes na nrụgide site etinye ezi ụda na ndụ gị. The CCTrax pụrụ nnọọ na-enye gị ike ibudata niile ọkacha mmasị gị songs for free na hassle free.
Ndụ na-arụrụ ya site imikpu onwe gị na ezi ụda na music. The MP3Fresh nwere ike ka i nwee ike inweta niile ọkacha mmasị gị songs na ezi music Genres. Na-ege ntị ọkacha mmasị gị songs bụ otu ụzọ e si enweta ntụrụndụ.
Zọpụta oge na mgbalị achọ ọkacha mmasị gị songs. The Stopaudio.com bụ otu nke kasị mma online redio na i nwere ike iji mfe ịchọta niile ọkacha mmasị gị songs. Ọ na-enye ohere ọrụ ibudata niile ha mmasị songs for free.
The Mp3-downloads.info nwere ike na-enye gị na-akparaghị ókè nhọrọ nke ọkacha mmasị gị songs. Site na nke a online ụlọ ahịa ị ga-nyere iji nweta niile ọkacha mmasị gị songs na inweta ya maka free.
Mgbe na-etinye na-agaghị emeli gị ọchịchọ inwe niile ọkacha mmasị gị songs na ezi music. Na-ege ntị ezi ụda bụ otu ụzọ ahụ ọtụtụ ndị nwere ike ime iji nweta ezumike na ntụrụndụ.
Download Music si YouTube Gị iPod iPhone na ngwaọrụ ndị ọzọ
> Resource> Music> Top 50 Free Music nbudata Sites ka Download Music maka Free